ကံတရားနဲ့ လုပ်သောအလုပ်ဆိုသည်မှာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကံတရားနဲ့ လုပ်သောအလုပ်ဆိုသည်မှာ
Posted by မောင် ပေ on Feb 10, 2013 in Creative Writing, Hobbies & Games |3comments
ကျုပ် မောင်ပေ သည် ဟိုးတုန်းကပေါ့ ၊ ၂၀၁၁ နှစ်ကုန်ခါနီးမှာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် ၊ ဘော်လုံးခန့် မှန်း ပို့ စ်များ မရေးဖြစ်ခင် ၊ ဘော်လုံးပွဲလောင်းကစားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ဘောလုံးသမားများ ဒီကိုလာ” ဆိုတဲ့ ပို့ စ်လေး တင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
ဘော်လုံးလောင်းကစားခြင်း ဆိုသည်မှာ ကံချည်းပဲမူတည်နေတဲ့ အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး
ငွေရေးကြေးရေးအရ လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့၊ လှည့်ကွက်လေးတွေ ၊ ဥာဏ်စိုက်ထုတ်ရတာလေးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ် ။ နောက်ပြီး အစဉ်အလာဆိုတာကိုလဲ သတိထားရပါသေးတယ် ။
ဒါပေသည့် အရပ်ထဲကလူတွေ ယေဘူယျ ပြောနေကြတာကတော့ ကံစမ်းတဲ့အလုပ် ၊ ကံပေါ်မူတည်တဲ့ အလုပ်လို့ပေါ့ဗျာ ။
ကောင်းပြီလေ ကံပေါ်မူတည်တဲ့အလုပ်လို့ ဆိုရင် ကံကောင်းဖို့ အတွက် ၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဘာသာရေး ၊ လူမှုရေး ၊ အလှူအတန်း ဒါနတွေလဲ ပြုရမပေပေါ့
ကျုပ်……. မောင်ပေသည်……. ခန့် မှန်းချက်များရေးနိုင်ဖို့ ၊ အမှန်ဆုံး ခန့် မှန်းနိုင်ဖို့ အတွက် နေ့ စဉ် ဘုရားဝတ်ပြုခြင်း ၊ အလှူဒါန ကို နဲများမဆို သဒ္ဒါစိတ်ပေါက်သလို လုပ်ခြင်းများနဲ့ကိုယ့်ကံ မနိမ့်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ပါတယ်။
ကျုပ်တို့ နိုင်ငံက တစ်ချို့ လူတွေကတော့ လောင်းကစားခြင်း ကို မွဲဆေးဖော်တဲ့အလုပ် လို့ ပြောနေကြပါတယ် ။ မှန်ပါတယ် ။ လောင်းကစားခြင်း ဆိုတာ ဘာမှမသိပဲ ရမ်းလုပ်ရင် ၊ မွဲ စေ မှာ အမှန်ပါပဲ
ဒါပေသည့် အဲဒီလို မွဲဆေးလို့ ပြောနေတဲ့ လူတွေ အတိအကျမသိတဲ့ အလုပ်ကတော့ ၊ ချမ်းသာသည် ဟု ဆိုသော လူတန်းစား အနဲငယ်နဲ့ ၊ လူလတ်တန်းစား အနဲငယ်တို့ ကတော့ ဘော်လုံးလောင်းကစားခြင်းမှ အကျိုးအမြတ်တွေ ရနေတယ်ဆိုတာပါပဲ ။
ဒီကိစ္စကို လူတိုင်း ဘာလို့ မသိကြသလဲ ဆိုရင် ၊ လောင်းကစားနဲ့အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်က ၊ တစ်ခြားလူကို ၊ သူဘာကြောင့် ပိုက်ဆံရပါတယ် ဆိုတာ.. မပြောကြပါဘူး ။
ဒီတော့… ပတ်ဝန်းကျင်သည် လောင်းကစားကြောင့် ဘဝပျက်သွားတာတွေကိုပဲ တွေ့ ရ ၊ ကြီးပွားချမ်းသာအကျိုးဖြစ်နေတာမျိုးကိုတော့ မတွေ့ ရတော့ ၊ လွယ်လွယ်ပြောကြတော့တာပေါ့ ။
ကျုပ် မောင်ပေ သည်နောက်ပိုင်း ခန့် မှန်း ပို့ စ်တွေ အဆက်မပြတ်ရေးတင်နေတယ်ဆိုတာ ၊ ကိုယ်ရေးတဲ့ ပို့ စ် မှာပါတဲ့ ပွဲချိန်တွေနဲ့ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ ပွဲတွေကို ပြန်စစ်လို့ ရလို့ ပါ ။
ညပိုင်း ဒက်စတော့ ရှေ့ မှာ မထိုင်ဖြစ်တော့တဲ့ အခါမျိုးကြရင် ၊ ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်သုံးရင်း ၊ ဘယ်ပွဲက ဘယ်အချိန်ကန်မှာလဲ ဆိုတာလေးကို အလွယ်တကူ ကြည့်ရတာပ ။
နောက်ပြီး ကျုပ် ခန့် မှန်းတယ်ဆိုတာလဲ ပွဲကန်ခါနီး ထွက်တဲ့အနေအထားတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီးမှ မှန်းခဲ့တာပါပဲ ။ ခန့် မှန်းတဲ့အတိုင်း မှန်လာတယ် မှားလာတယ် ဆိုတာကတော့ ၊ ကြားထဲမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အခြေအနေအမျိုးမျိုးအပေါ်မှာ မူတည်မှာပါ ။
ဆိုတော့ဗျာ… ကျုပ် ရမ်းမခန့် မှန်းရဲ တဲ့အတွက် ၊ သည်မှာထွက်တဲ့ ဈေးကို မသိရမချင်း ၊ မခန့် မှန်းရဲသေးတာကို ၊ ကျုပ် စာဖတ်သူများ နားလည်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါရစေနော
8.00 အက်စတွန်ဗီလာ(၁၉) – ဝက်ဟမ်း(၁၁)
10.30 မန်ယူ(၁) – အဲဗာတန်(၆)
*** ဘွန်ဒက်လီဂါ ***
9.00 အော့စ်ဘတ်(၁၇) – မိန့် ဇ်(၆)
11.00 ဖရိုင်းဘတ်(၁၀) – ဒူဆယ်ဒေါ့ဖ်(၁၅)
6.00 ပါးမား(၁၀) – ဂျီနိုအာ(၁၇)
8.30 အက်တလန်တာ(၁၃) – ကာတားနီးယား(၇)
8.30 ဘိုလော့နာ(၁၄) – ဆီနာ(၁၉)
8.30 ကယ်ဂလီယာရီ(၁၆) – အေစီမီလန်(၄)
8.30 ပါလာမို(၂၀) – ပက်စကာရာ(၁၈)
8.30 ဆမ်ဒိုးရီးယား(၁၅) – ရိုးမား(၈)
8.30 အူဒီးနီး(၉) – တိုရီနို(၁၁)
2.15 အင်တာမီလန်(၅) – ချီယေဗို(၁၁)
5.30 ဘာစီလိုနာ(၁) – ဂီတာဖေး(၁၂)
10.30 ဇာရာဂိုဇာ(၁၆) – ဆိုစီဒက်(၈)
12.30 ဘီဘာအို(၁၄) – အက်စ်ပန်ညို(၁၅)
2.30 ဗယ်လကာနို(၇) – အသလက်တီကို(၂)
အိမ်ကွင်းမှာ အနိုင်ပြန်ရှာမှာက “ပါးမား”
ပါးမား(၁၀) – ဂျီနိုအာ(၁၇)
ပါးမား စီးရီးအေပွဲစဉ်၂၃အပြီး ၈ နိုင် ၊ ၇ သရေ ၊ ၈ ရှုံး ၊ ရဂိုး၃၀ ပေးဂိုး၃၁ ၊ ၃၁မှတ်
ဂျီနိုအာ စီးရီးအေပွဲစဉ်၂၃အပြီး ၅ နိုင် ၊ ၆ သရေ ၊ ၁၂ ရှုံး ၊ ရဂိုး၂၅ ပေးဂိုး၃၇ ၊ ၂၁မှတ်
ဖီအိုရင်တီးနား ၂-၀ ပါးမား
ပါးမား ၁-၂ နာပိုလီ
ချီယေဗို ၁-၁ ပါးမား
ပါးမား ၁-၁ ဂျူဗင်တပ်
ပါးမား ၂-၁ ပါလာမို
ဂျီနိုအာ အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲတွေကတော့
ဂျီနိုအာ ၃-၂ လာဇီယို
ဂျူဗင်တပ် ၁-၁ ဂျီနိုအာ
ဂျီနိုအာ ၀-၂ ကာတားနီးယား
ကယ်ဂလီယာရီ ၂-၁ ဂျီနိုအာ
သည်နှစ်သင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများကတော့
Sep 26, 2012 Genoa 1 – Parma 1
Feb 25, 2012 Genoa2– Parma 2
Oct 2, 2011 Parma3– Genoa 1
Jan 30, 2011 Genoa3– Parma 1
ဈေးအနေအထားအရ ပါးမား သရေဆိုရင် အပြည့်ရှုံးအနေအထားကို သည်မှာ တစ်ဂိုးအနိုင်ဖွင့်မလား ၊ ဒါမှမဟုတ် ပါးမား သရေဆိုရင် ၉၀ပတ်ချာလည် အရှုံးဖွင့်မလား မသိရသေးပါဘူး
အိမ်ကွင်းမှာ အနိုင်သေချာပေါက် ပြန်ရှာမယ့်
“““ ပါးမား ””” ကို အားပေးသင့်ပါတယ်
ဒီညပွဲတွေ ဈေးထွက်လာချိန်မှာ ကြည့်မိလိုက်တော့ ၊ ရှုံးပွဲဆက်နေတဲ့ အသင်းတွေဟာ နေရဲချင်စရာမရှိတဲ့ ဈေးအနေအထားတွေနဲ့ ထွက်လာတာကို တွေ့ ရပါတယ်
ပွဲချိန်လဲ နီးနေပြီမို့၊ အရှည်ကောက်မရေးတော့ပါဘူး
“““ ရိုးမား ”””
“““ အေစီမီလန် ”””
“““ ဘိုလော့နာ ”””
“““ အင်တာမီလန် ”””
“““ အဲဗာတန် ”””
အဲဒီ ငါးသင်းကို အားပေးရင် ပျော်ရွှင်ရမှာ သေချာပါတယ်
******* အားလုံး အောင်မြင် ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ *******
စနေလန်းရင် တနင်္ဂနွေကြမ်းမတဲ့ 
ကဲ လာလေ့……!!!!
အခြား ဟာတွေလည်း သူ့ဟာနဲ့သူ ခန့်မှန်းကြည့်ရတာပဲ ..
တစ်ခါတစ်ခါ ခန့်မှန်းတာနဲ့ ကွက်တိတိုးမယ် ..
တစ်ခါတစ်ခါ ခန့်မှန်းတာနဲ့ တက်တက်စင်အောင် လွဲမယ် …
ဒါ … ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောတရားပဲလို့ ထင်ပါတယ် …
ဒီတော့ကာ … မှန်းတာ မှန်းဗျာ ..
ကျွမ်းကျင်တဲ့လူ မှန်းရင် လွဲခဲပါတယ် ….
ပါးမား နွားလား စားသွား တအားများ..